Ithegi: Ukuthengisa iWebinar | Martech Zone
Ithegi: Ukuthengisa iWebinar
Lwesine, Matshi 26, 2020 NgoLwesibini, Matshi 2, 2021 Douglas Karr
Ngengxaki yangoku, iingcali zeshishini zizifumana zodwa kwaye zisebenza ekhaya, zixhomekeke kwizicwangciso zevidiyo kwiinkomfa, iifowuni zentengiso, kunye neentlanganiso zeqela. Okwangoku ndiyazihlukanisa kwiveki ezayo okoko umhlobo wam wachazelwa umntu ovavanye ukuba une-COVID-19, ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndibeke ezinye iingcebiso zokukunceda ulunge ngakumbi ividiyo njengesixhobo sakho sonxibelelwano. Iingcebiso zeVidiyo yaseKhaya ngokungaqiniseki kwezoqoqosho,
I-BrightTALK, ebipapasha idatha ye-benchmark ye-webinar ukusukela nge-2010, yahlalutya ngaphezulu kwe-14,000 ii-webinars, ii-imeyile ezizigidi ezingama-300, ukondla kunye nokunyuselwa kwezentlalo, kunye nezigidi ezili-1.2 zeeyure zokuzibandakanya kunyaka ophelileyo. Ingxelo yonyaka inceda abathengisi be-B2B ukuthelekisa intsebenzo yabo kunye nezo mveliso zabo kwaye babone ukuba zeziphi iinkqubo ezikhokelela kwimpumelelo enkulu. Kwi-2017, abathathi-nxaxheba bachitha i-avareji yemizuzu engama-42 bebukele i-webinar nganye, ipesenti ye-27 inyuka ngaphezulu konyaka
Ngaba uyazi ukuba, ngokomndilili, abathengisi be-B2B basebenzisa iindlela ezili-13 ezahlukeneyo zokuthengisa kwimibutho yabo? Andazi ngawe, kodwa lonto indinika intloko ngokucinga ngayo. Nangona kunjalo, xa ndicinga ngayo, sinceda abathengi bethu ukuba basebenzise malunga namaqhinga amaninzi minyaka le kwaye elo nani linyuka kuphela njengoko abalamlamli begcwele ngakumbi. Njengabathengisi, kufuneka sibeke phambili ngokubaluleka ukuba siza kuya phi kwaye nini